Ireo rindranasa efatra tsara indrindra hanakanana ny antso amin'ny Android | Androidsis
Imbetsaka isika no nahazo antso avy amina orinasa te-hivarotra zavatra tsy ilainay. Na misy olona tsy te hifandray aminay ary miantso anay foana izy ireo. Amin'ireny tranga ireny dia mazàna isika manana lfahafaha-manakana antso amin'ireo olona ireo. Ankoatr'izay, amin'ny Android dia manana rindranasa marobe izahay izay manome antsika io safidy io.
Amin'izany fomba izany, amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo rindranasa ireo ho an'ny Android, azontsika atao ny manakana ireo antso sy / na hafatra amin'ireo isa tadiavintsika. Noho izany, eto ambany izahay dia mamela anao hisafidy ireo rindranasa tsara indrindra amin'ity sokajy ity. Azonao atao ny misafidy izay mifanaraka aminao indrindra.
Noho ireo rindranasa ireo dia azonao atao ny manala ireo antso tsy ilaina rehetra ireo amin'ny fomba tsotra. Ary tsy hanana ahiahy intsony ianao satria afaka mifandray aminao ireo olona na orinasa ireo. Ny fiasan'ireo rindranasa ireo dia matetika mitovy, na dia manome asa fanampiny aza ny tsirairay.
1 Call Control - Call Blocker
3 Andriamatoa Nomera - Sakano ny antso & spam
4 Miantso Blacklist
Manomboka amin'ny iray amin'ireo isika Fampiharana fanta-daza sy tsara indrindra ao amin'ny Play Store. Izy io dia fampiharana iray izay ny fandidiana sy ny endriny dia tsotra, mety ho an'ny mpampiasa rehetra. Na dia miavaka amin'ny fandraisana anjaran'ireo mpampiasa azy aza. Satria izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny famoronana lisitra mainty misy nomeraon-telefaona spam. Fantatrao hoe iza amin'ireo isa izay tsy tokony hovalinao mihitsy ary afaka manakana mivantana ianao. Azontsika atao koa ny manamarina raha misy nomeraon-telefaona manokana ao amin'ity sokajy spam ity. Ho fanampin'izany, manome antsika safidy hametraka fotoana fohy izay tsy tiantsika ny hahazo antso. Fampiharana mahasoa ary tena mora ampiasaina amin'ny fotoana rehetra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra. Saingy tsy ilaina ny mandoa na inona na inona hampiasana ny fampiharana miaraka amin'ny tombony rehetra.
Iray amin'ireo fampiharana fanakanana antso tsara indrindra hitantsika ao amin'ny Play Store, satria ny zava-drehetra dia aseho amin'ny fomba tena hita maso sy mahafinaritra. Izay hanamora ny fampiasantsika azy. Ny rindranasa dia mampiseho ny lozisika antso, satria hitantsika amin'ny telefaona io. Mamela antsika hitady isa ary hanitsy azy ireo, raha sanatria misy tarehimarika tianay sakanana. Izy io koa dia ahafahantsika manakana ny antso an-tarobia, ankoatry ny fanakanana ireo hafatra an-tsoratra. Manatanteraka tsara ny iraka ampanaovina azy ary fampiharana tsotra ampiasaina. Ny iray amin'ireo tanjany dia manome antsika safidy safidy manokana.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Tsy dokam-barotra mahasosotra loatra izy ireo, soa ihany, ka tsy mila mandoa vola izahay hampiasa ilay rindranasa.
Truecaller: ID sy log log, spam
Andriamatoa Nomera - Sakano ny antso & spam
Fahatelo hitantsika ity fampiharana ity hahafahantsika manakana ireo antso rehetra izay tsy tiantsika horaisina ireo. Io dia ahafahantsika manakana isa izay mbola tsy nantsoina na manana ny fandaharam-potoana. Ankoatry ny fanomezana antsika ny fahafaha-manakana ny telefaona orinasa sy ny telemarketing, ilay antsoina hoe spam amin'ity tranga ity. Hahafahana manakana ny SMS alefan'ny sasany amin'ireto isa ireto koa izahay. Afaka mamorona ny lisitry ny laharana voasakana izahay, izay ahafahantsika manara-maso ireo telefaona nosakananay tamin'ny fampiasana azy. Mikasika ny famolavolana, manana interface tsotra, fa manatanteraka tsara ny iraka ampanaovina azy. Ho mora aminao ny fampiasana azy.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ankoatr'izay, tsy manana karazana doka ato anatiny izahay, ary tsy misy fividianana. Ka tsy manana fanelingelenana ao anatin'ny fampiharana izahay, ary tsy mila mandany vola hampiasa azy io.
Andriamatoa Nomera - ID mpiantso & Fiarovana amin'ny spam
Amin'ny toerana fahefatra mahita iray amin'ireo fampiharana tsotra indrindra izahay manana ny lisitra isika. Satria tsy fampiharana manome tolotra fanampiny fanampiny izy io, dia manana andraikitra tena mazava. Mikasa ny hanakana ny antso izay tsy tiantsika horaisina, ary ity dia zavatra mahatalanjona. Ny fampidirana isa amin'ny lisitra mainty dia tsotra be, ary afaka jerentsika izay telefaona nampidirintsika tao. Azonao atao ny manampy telefaona ananantsika ao amin'ny lisitry ny fifandraisana na hoe niantso anay tamin'ny fotoana iray izy ireo. Rehefa manandrana miantso anao ny olona iray nosakananao dia hampandre anao ilay fampiharana ka hahafahanao mifehy tsara an'io. Ary koa, afaka mamorona lisitra mainty sy fotsy amin'ny fampiharana izahay.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia toy ny amin'ireo rindranasa hafa ao amin'ilay lisitra aza dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny izahay. Tsy dokam-barotra tsy mahasosotra ireny, soa ihany. Ary ny fividianana dia tsy voatery amin'ny fotoana rehetra.
Call sy SMS Blocker - Miantso Blacklist
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana tsara indrindra hanakanana ny antso amin'ny Android
Mila manonona HIYA aho, mpandahatra spam tsara sy antso tsy ilaina
Ny sainan'i Meitu manaraka dia hanana Qualcomm Snapdragon 845
Voasivana ny famaritana ny Blackberry KEY2 LE, finday manaraka an'ny orinasa